लकडाउनपछि नम्रतादेखि स्वस्तिमाको पारिश्रमिक घट्यो कि बढ्यो ? लकडाउनपछि नम्रतादेखि स्वस्तिमाको पारिश्रमिक घट्यो कि बढ्यो ?
लकडाउनका कारण ६ महिनादेखि नेपाली चलचित्रको काम ठप्प छ । चलचित्रको छायांकन र रिलिज रोकिएका छन् । चलचित्रकर्मीहरु काम कहिले सुरु हुन्छ भन्ने आशमा छन् । केही निर्माताहरु चलचित्र निर्माणका लागि कलाकार समेत छनोट गरेर बसेका छन् । लकडाउन भएपछि निर्माताहरुलाई चलचित्र बनाउन समस्या नहोस् भनेर धेरै कलाकारले आफ्नो पारिश्रमिक कटौती गर्ने पनि बताएका थिए ।
नायक दयाहाङ राई, पल शाह, नायिका स्वस्तिमा खड्का लगायतले पारिश्रमिक कम गरेर काम गर्न आफूहरु तयार भएको बताएका थिए । नायिका नम्रता श्रेष्ठ र नायक विपिन कार्कीले करिब एक महिना अगाडि चलचित्र ‘प्रसाद २’ साइन गरेका हुन् । हुनत, यो चलचित्रका लागि उनीहरुले २५ लाख पारिश्रमिक मागेको चर्चा पनि नचलेको होइन । तर, वुझिएअनुसार यो चलचित्रका लागि उनीहरुले उच्च पारिश्रमिक लिएका छैनन् ।
‘प्रसाद’मै लिए अनुसारको पारिश्रमिक उनीहरुले ‘प्रसाद २’मा लिएका छन् । उनीहरुले १२ देखि १५ लाखको विचमा पारिश्रमिक वुझेका छन् । यसैले, लकडाउनपछि पनि उनीहरु महंगिएका भने छैनन् । नायिका स्वस्तिमा खड्काले चलचित्र ‘चिसो मान्छे’मा काम गर्ने पक्का भएको छ । कागजी रुपमा संझौता नभएकाले पनि उनको पारिश्रमिकको कुरा नभएको निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल बताउँछन् । खनालले भने–‘स्वस्तिमाले पारिश्रमिक भन्दा पनि चलचित्र नै उत्कृष्ट बनाउनुपर्छ भन्नेमा बढी ध्यान दिएकी छिन् ।
कोरोनाका कारण चलचित्र क्षेत्र के हुन्छ भन्ने अवस्थामा रहेकाले राम्रो चलचित्र बनाउनुपर्छ र काममा कुनै संझौता गर्नुहुदैन भन्ने स्वस्तिमाको तर्क छ । पारिश्रमिकमा उनको ध्यान गएको मैले पाइनँ ।नायिका स्वेता खड्काले पनि यम थापाको निर्देशनमा बन्ने चलचित्र साइन गरेकी छिन् । तर, यो चलचित्रका लागि स्वेताले महंगो पारिश्रमिक लिएकी छैनन् । स्वेताले यसैपनि बाहिरी ब्यानरका कमै चलचित्रमा काम गरेकी छिन् । तर, उनले बाहिरी ब्यानरको चलचित्र खेल्दा पारिश्रमिकमा डिमाण्ड नगरेको वुझिएको छ ।
नेपाली चलचित्र : लयमा फर्किन नपाउँदै फेरि अन्योलमा